सार्वजनिक सम्पत्तिप्रति बेखबर लम्की नगर – EKalopati
सार्वजनिक सम्पत्तिप्रति बेखबर लम्की नगर
७ भाद्र २०७७, आईतवार १७:३०
टंककला तिमिल्सेना, काठमाडौँ । बर्दिया जिल्लाको सिमा सकिने वित्तिकै सुदुरपश्चिम प्रदेशमा कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिकाले स्वागत गर्छ । पूर्वबाट पश्चिमतर्फ आउनेहरुकालागि सुन्दर स्वागत गेट जस्तै हो कर्णाली पुलसँगैको चिसापानी क्षेत्र, जुन लम्की चुहा नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा रहेको छ । कर्णाली चिसापानी क्षेत्र मात्र होईन लम्की चुहा नगरमा यस्ता धेरै ठाउँ छन् जसले यस नगरको सुन्दरता र महत्वलाई थप बलियो बनाएका छन् ।
यहाँ नगरको महत्व झल्काउन महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने मठमन्दिरदेखि खुल्ला चौर र खुल्ला चौरदेखि सार्वजनिक जग्गाहरु रहेका छन् । प्राकृतिक सन्तुलन्ता कायम गर्न उल्लेख्य भुमिका खेल्ने खोला, नाला, झरन, कुला थुप्रै छन् यस नगरमा । खेलकुदकालागि राम्रो सम्भावना बोकेको यस नगरभित्र खेलकुदकालागि खुल्ला चौर उल्लेख्य छन् । धार्मिक पर्यटनको सम्भावना बोकेको यस क्षेत्रमा धार्मिक क्षेत्र व्यवस्थापनकालागि थुप्रै सम्भावना छन् । नगरको वैज्ञानिक तवरबाट व्यवस्थापनकालागि आवश्यक थुप्रै सार्वजनिक जग्गा छन् । एकै शब्दमा भन्दा वैज्ञानिक व्यवस्थापनकालागि ठुला सहरहरु काठमाडौ, पोखरामा जस्तो जग्गाको समस्या छैन यस नगरमा ।
तर, लम्की चुहा नगरको स्थिति भने अस्तव्यस्त छ । यहाँका सार्वजनिक जग्गाहरु राजनीतिक र आर्थिक शक्तिको आडमा निजी प्रयोजनकालागि व्यक्तिले कब्जा गरिरहेका छन् । सार्वजनिक जग्गा निश्चित झुण्डले व्यक्तिगत जसैगरी प्रयोगमा ल्याइरहेका छन् । धेरै ठाउँहरु त यस्ता छन् जहाँ लम्की चुहा नगरपालिकाको आँखा नै पुग्न सकेको छैन । बेखबर जस्तै छ नगरपालिका आफ्ना सार्वजनिक सम्पत्तिप्रति । नगरभित्रको सहरी क्षेत्रमा निर्वाद बग्ने खोलाहरु माथि ठुल्ल-ठुला भवन निर्माण भएका छन् । खोला मिचेर बनाइएका भवनले यस्तो भान गराउँछन् की यहाँ त कुनै खोला नै छैन । तर, खोलालाई पैसा र राजनीतिक शक्तिले पर्खाल लगाइदिएको छ जुन सामान्य नागरिकको नजरबाट लुकेको छ । शक्तिको आडमा सहरी क्षेत्रका संरचनामाथि सेटिङ मिलाउने काम यस नगरमा पहिलेदेखि नै चल्दै आएको छ ।
उता, नगरको सहरी क्षेत्रमा शक्तिको आडमा सार्वजनिक जग्गा र प्राकृतिक सम्पत्तिलाई व्यक्तिले कब्जा गरेर मासिइरहेका छन् , यता यस नगरको गाउँ क्षेत्रमा भएका सार्वजनिक जग्गा, चौर आदी संरक्षण र संर्वद्धनको अभावमा मासिदै गएका छन् । नगरपालिकासँग नै आफुसँग कति सार्वजनिक जग्गा छ ? कहाँ के कति र कस्तो अवस्थामा यिनको प्रयोग भैरहेको छ ? भन्ने एकिन विवरण छैन । नत यस प्रति नगरपालिकाले कुनै खास चासो देखाई अभिलेख तयार गर्ने काम गरेको छ ।
नगरभित्र झरनहरुपनि थुप्रै छन् जुन अहिले अतिक्रमणको चपेटामा छन् यस बारे त झनै नगरपालिका उत्तरदायित्वहिन जस्तो देखिएको छ । अतिक्रमणको चपेटामा रहेका पुराना झरनहरुबाट अहिले पानी निकासा हुँदैन यस्ता कतिपय ठाउँमा संरचना बनेका छन् त कति व्यक्तिले कब्जा गरिरहेका छन् । यिनको संरक्षण गरे नगरपालिकालागि भावि दिनमा कुनै निश्चित परियोजना निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने अवस्था आउने थिएन ।
चौर व्यवस्थापन गरे नगरलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापनकालागि आवश्यक पर्ने खुल्ला क्षेत्र र संरचनाकालागि भोलिका दिनमा सहयोग हुन सक्थ्यो । ठाउँ-ठाउँमा चौतारा, पार्टी पौवा भत्केका छन् । यिनको संरक्षणकालागि पनि नगरपालिकाले खास काम गरेको देखिदैन ।
यसरी पैसा र राजनीतिक शक्तिको आडमा सार्वजनिक सम्पत्ति मासिदै जाने हो भने आगामि दिनमा नगरपालिकाको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ । खोला छोपेर भवन ठड्याइएका छन् । पानी निकासा हुने ठाउँ नै साँघुरिदै जाँदा डुबानको समस्यासँगै प्रकृतिमाथि अन्याय भैरहेको छ । खोला, नालाबाट प्राकृतिक सम्पत्ति दोहन भैरहेको छ । यसमा नगरपालिकाले खास कदम चाल्न सकेको छैन । यसले भोली यस क्षेत्रका जनताले ठुला प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ यस तर्फ नगरपालिकाको ध्यान निकै कमजोर स्तरमा देखिएको छ ।
केन्द्रीय समिति थप गरिरहने हो भने नेपाली कांग्रेस नै रहन्न : शेखर कोइराला
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको विपन्न, श्रमजीवी वर्ग एवं समुदायमा परिरहेको मर्काप्रति संवेदनशील हुन सरकारसँग माग
९३ प्रतिशत नेपाली जनता खोपबाट बञ्चित, प्रधानमन्त्रीले भने दुवै डाेज लगाए
फरार मुद्दाका ४७ जना पक्राउ
महिला बेचविखनको हव वन्दै नेपाल, राजनीतिक शक्तिकै आडमा महिला तस्करी
लमहीमा गाडी तोडफोड गर्ने दुई जना प्रहरीको नियन्त्रणमा
बाबा रामदेव र बालकृष्ण एलोपेथिकतिर कुदे सर्वसाधारण रामदेवको औषधि सेवन गर्दै मर
काठमाडौंमै सिटामोल अभाव
खोटाङका एकजना जनप्रतिनिधि, जो कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आफैं बिरामी बोक्छन्
शिक्षामन्त्री बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन तयार
यही पृथ्वीमा रहेको एउटा स्थान जहाँ आगाका लप्काहरुको वर्षा हुन्छ, जसको तापक्रम एक सय २५ डिग्रीसम्म पुग्छ
लेखपढ नै नगरेका मान्छे गउँभरिकै डाक्टर ?